၂၃၀ ကေဗွီ သပြေဝ-မြင်းခြံ(သံမဏိစက်ရုံ)
၂၃၀ ကေဗွီ သာစည်-သပြေဝ
၂၃၀ ကေဗွီ ရဲရွာ-သပြေဝ
၂၃၀ ကေဗွီ ဘဲလင်း-သပြေဝ
၂၃၀ ကေဗွီ ရွှေစာရံ-ဘဲလင်း
၂၃၀ ကေဗွီ ရဲရွာ-ဘဲလင်း
၂၃၀ ကေဗွီ ရွှေစာရံ-မြောက်ပြင်
၂၃၀ ကေဗွီ မြင်းခြံ (Sembcorp) အဝင်/ အထွက်
၁၃၂ ကေဗွီ ရွှေစာရံ-ရတနာပုံ
၁၃၂ ကေဗွီအင်းကုန်း - တောင်တော်ကွင်း
၁၃၂ ကေဗွီမြင်းခြံ - စွန်လွန်း
၁၃၂ ကေဗွီ ရွှေလီ(၃)- လက်ပံလှ
၆၆ ကေဗွီမြင်းခြံ - ဆီမီးခုံ (၂)
၆၆ ကေဗွီဆီမီးခုံ (၂) - ရွာသစ်
၆၆ ကေဗွီရွာသစ် - ကျောက်တလုံး
၆၆ ကေဗွီမြင်းခြံ -နဘူးအိုင်
၆၆ ကေဗွီ မြင်းခြံ - ငါန်းဇွန်
၃၃ ကေဗွီကျောက်ဆည် (GT)- ဘဲလင်း
၃၃ ကေဗွီ မြို့ကြီး - တောင်တော်ကွင်း
၂၃၀ ကေဗွီပင်မဓာတ်အားခွဲရုံများ (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)
မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ဆာခါးကျေးရွာအနီး။
မိတ္ထီလာခရိုင်၊ သာစည်မြို့နယ်၊ သပြေဝကျေးရွာ။
ကျောက်ဆည်မြို့၊ ဘဲလင်းကျေးရွာ ။
၁၃၂ ကေဗွီပင်မဓာတ်အားခွဲရုံများ (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူမြို့နယ်၊ လက်ပန်လှကျေးရွာ။
ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ သင်္ဂတုံကျေးရွာ။
(၁) ၂၃၀ ကေဗွီ မြင်းခြံ(သံမဏိ) ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ (၄)ရက်
၂၃၀/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၈၅အမ်ဗွီအေ(Tamini, Italy)
၂၃၀/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၈၅ အမ်ဗွီအေ(LEEEC, China)
၂၃၀/၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၈၅ အမ်ဗွီအေ(LEEEC, China)
စုစုပေါင်း ၂၅၅ အမ်ဗွီအေ
(၁) သပြေဝ ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) Sembcorp ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) Electric Arc Furnace ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) Laddle Refining Furnace ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) Statistic Var Compensator ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) Electric Arc Furnace ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) Laddle Refining Furnace ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) Statistic Var Compensator ဓာတ်အားလိုင်း
(ဂ) ၁၁ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ စုစုပေါင်း(၁၁)လိုင်း
(၁) Melting Shop ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) Continuous Casting Machine-1 ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) Continuous Casting Machine-2 ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) Water Treatment Plant-1 ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) Water Treatment Plant-2 ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) Fume Treatment Plant ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) Air Separation Plant ဓာတ်အားလိုင်း
(၈) Admin ဓာတ်အားလိုင်း
(၉) Tube Well ဓာတ်အားလိုင်း
(၁၀) Fire Services ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ၂၃၀ ကေဗွီ မြောက်ပြင် ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တ‌လေးခရိုင်၊ မန္တ‌လေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃) ရက် TR No.(1)&(2)
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၂) ရက် TR No.(3)
၂၃၀/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၁၀၀အမ်ဗွီအေ (LEEEC, China)
၂၃၀/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၁၀၀အမ်ဗွီအေ (ABB, Thailand)
(၁) ရွှေစာရံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) ဒင်္ဂါးချောင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) မရမ်းခြံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ရွှေကျောင်းကြီး ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) ဟေမာဇလ ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) ညောင်ကွဲ ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) အီတို ဓာတ်အားလိုင်း
(၈) ဝါခင်းကုန်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၉) တိုက်တော် ဓာတ်အားလိုင်း
(၁၀) ၇၆ လမ်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၁၁) မြို့ရေပေးဝေရေး(MCDC) ဓာတ်အားလိုင်း
(ဂ) ၁၁ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ
အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မတ္တရာမြို့နယ်။
(၃) ၂၃၀ ကေဗွီ ရွှေစာရံ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက်
၂၃၀/၁၃၂/၁၁ကေဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီအေ (Areva, China)
၂၃၀/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၆၀ အမ်ဗွီအေ (LEEEC, China)
(၁) မန်စံ(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) မန်စံ(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ဘဲလင်း(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) မြောက်ပြင် ဓာတ်အားလိုင်း
(ခ) ၁၃၂ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ
(၁) ပြင်ဦးလွင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) တံခွန်တိုင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) ရွှေလံဘို ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ပုသိမ်ကြီး ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ပြည်ကြီးတံခွန် ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) ချမ်းမြသာစည် ဓာတ်အားလိုင်း
ရွှေလံဘို၊ ပုသိမ်ကြီးမြိုနယ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
(၄) ၂၃၀ ကေဗွီ သပြေဝ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
သပြေဝကျေးရွာ၊ သာစည်မြို့နယ်၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်
၂၃၀/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၆၀အမ်ဗွီအေ (LEEEC, China)
၂၃၀/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၆၀အမ်ဗွီအေ (Siemens, China)
(၁) ဘဲလင်း(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) ရဲရွာ(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) သာစည် ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) မြင်းခြံ(သံမဏိ) ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) တောင်တွင်းကြီး ဓာတ်အားလိုင်း
(ခ) ၃၃ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ
(၁) ဝန်ဇင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ရှမ်းတဲ ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) စက်မှုဇုန် ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) ဝမ်းတွင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) တကစ(၁၀)စက်ရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) တကစ(၁၀)ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) တကစ(၁) ချည်စက် ဓာတ်အားလိုင်း
(၈) တကစ(၁)စက်ရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
မိတ္ထီလာခရိုင်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်ကျေးရွာများနှင့် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များ။
(၅) ၂၃၀ ကေဗွီ သာစည် ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
သာစည်မြို့နယ်၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်
၁၃၂/၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၃၀ အမ်ဗွီအေ (Hyosung, Korea)
၁၃၂/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၃၀ အမ်ဗွီအေ (Trafounion, Germany)
၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၅ အမ်ဗွီအေ
စုစုပေါင်း ၂၆၅ အမ်ဗွီအေ
(၁) ရွှေမြို့ ဓာတ်အားလိုင်း
(ခ) ၁၃၂ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ
(၁) ရေပေါင်းဆုံ(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ရေပေါင်းဆုံ(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ဘဲလင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) ကင်းတား ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) ချောက် ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) မြင်းခြံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) တပ်မတော်ချည်စက် ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) 999+ရေအရင်းအမြစ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) လှိုင်းတက် ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) ဖလန်ကျင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) ပ.လ.စ(၃) ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) ပျော်ဘွယ်(ချည်စက်) ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) သာစည် ဓာတ်အားလိုင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ သာစည်မြို့နယ်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်။
(၆) ၂၃၀ ကေဗွီ ဘဲလင်း ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ (၃၁)ရက်
၂၃၀/၁၃၂/၁၁ ကေဗွီ ၁၀၀အမ်ဗွီအေ(Areva, China)
၂၃၀/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၁၀၀အမ်ဗွီအေ(Alstom, India)
(၁) ရွှေစာရံ(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ရွှေစာရံ(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) သပြေဝ(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) သပြေဝ(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) ရဲရွာ(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) ရဲရွာ(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) အုန်းတော(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၈) အုန်းတော(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) အောင်ပင်လယ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) သာစည် ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) အင်းကုန်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) ကျောက်ဆည် ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ဓာတ်တော် ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ဆင်မင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) MOGE ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) စဉ့်ကိုင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) APR Gas Engine ဓာတ်အားလိုင်း
ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ပုလိပ်မြို့၊တံတားဦးမြို့နယ်၊ အမရပူရမြို့နယ်။
(၇) ၂၃၀ ကေဗွီ အောင်ပင်လယ် ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၉) ရက်
၂၃၀/၁၃၂/၁၁ ကေဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီအေ (New)
၁၃၂/၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၃၀ အမ်ဗွီအေ (NANTONG, CHINA)
၁၃၂/၁၁ ကေဗွီ ၃၁.၅ အမ်ဗွီအေ (Changzhou, China)
စုစုပေါင်း ၁၆၁.၅ အမ်ဗွီအေ
(က)၂၃၀ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ
(၁) မြောက်ပြင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ရွှေစာရံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) ဆည်တော်ကြီး ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ဘဲလင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) တံခွန်တိုင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) မြို့မ ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) စက်မှုသင်တန်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ထွန်တုန်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) ဝါခင်းကုန်း ဓာတ်အားလိုင်း
(ဃ) ၁၁ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ
(၁) နန်းရှေ့ ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ၂၆ လမ်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ၂၈ လမ်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) ၃၅ လမ်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) မန္တ‌လေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) ၃၀ လမ်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) မဟာမြိုင် ဓာတ်အားလိုင်း
အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ချမ်းမြ သာစည်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်။
(၁) ၁၃၂ ကေဗွီ တံခွန်တိုင်ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၁)ရက်
၁၃၂/၃၃ ကေဗွီ ၈၀ အမ်ဗွီအေ (Hawker Siddeley, England)
၁၃၂/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၃၀ အမ်ဗွီအေ (Mitsubishi, Japan)
၁၃၂/၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၅၀ အမ်ဗွီအေ (Chint, China)
(က) ၁၃၂ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ
(၁) ဘဲလင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) အောင်ပင်လယ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) ပလိပ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) လေဆိပ်(ဦးစား) ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) လေဆိပ်(အရံ) ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) စစ်ကိုင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) နို့ချက် ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) စက်မှုဇုန်(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) သံဃာ့ဆေးရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၈) ဗားကရာ ဓာတ်အားလိုင်း
(၉) အားကစားကွင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၁၀) သင်ပန်းကုန်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၁၁) ချီပါ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁၂) ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁၃) ခမ်းနားသောဟိုတယ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) ရဲရွာရိပ်သာ ဓာတ်အားလိုင်း
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ပုလိပ်မြို့နယ်၊ တံတားဦးမြို့နယ်။
(၂) ၁၃၂ ကေဗွီ မြင်းခြံ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
မြင်းခြံမြို့၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၅)ရက်
၆၆/၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၃၀ အမ်ဗွီအေ (Fortune, China)
(၁) သာစည် ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) Aggreko ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) ညောင်ဦး မြစ်ရေတင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ဆိတ်ညံ မြစ်ရေတင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ဆီမီးခုံ(၁) မြစ်ရေတင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) ဆီမီးခုံ(၂) မြစ်ရေတင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) ကျောဇီ ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) မြင်းခြံ(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) နဘူးအိုင်(စက်မှုဝန်ကြီးဌာန) ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) တောင်သာ ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) သံမဏိစက်ရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) သာပေါင်း မြစ်ရေတင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) မြင်းခြံ(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) နွားထိုးကြီး ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) MOGE ဓာတ်အားလိုင်း
မြင်းခြံမြိုနယ်အတွင်းရှိမြစ်ရေတင်များ၊ တောင်သာ၊ မလှိုင်၊ နွားထိုးကြီး၊ ငါန်းဇွန် မြို့နယ်များ၊ မြစ်သားမြို့၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ပုဂံမြို့နယ်အတွင်းရှိမြစ်ရေတင်များ၊ မြောင်မြို့နယ်၊ တွင်းကြီးမြစ်ရေတင်၊ နဘူးအိုင် ဝန်ရိုးစက်ရုံ၊ မြို့သာ၊ မြင်းခြံစက်မှုဇုန်
(၃) ၁၃၂ ကေဗွီ ယင်းမာပင် ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
ယင်းမာပင်တိုက်နယ်ကျေးရွာအနီး၊ သာစည်မြို့နယ်၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်
၁၃၂/၃၃ ကေဗွီ ၁၅ အမ်ဗွီအေ (Brush, England)
စုစုပေါင်း ၁၅ အမ်ဗွီအေ
(က) ၁၃၂ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) ရေပေါင်းဆုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) Engine Plant ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) တ.က.စ (၂) ဓာတ်အားလိုင်း
အမှတ်(၂)တပ်မတော်အကြီးစားစက်ရုံ၊ ယင်းမာပင်တိုက်နယ်၊ သာစည်မြို့။
(၄) ၁၃၂ ကေဗွီ ရတနာပုံ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
ရတနာပုံမြို့သစ်၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၃၂/၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၁၈ အမ်ဗွီအေ(Areva, Indonesia)
စုစုပေါင်း ၁၈ အမ်ဗွီအေ
(ခ) ၃၃ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) မြောက်ပိုင်းအိမ်ရာ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) Teleport ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) Incubation ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) Softbase ဓာတ်အားလိုင်း
ရတနာပုံတယ်လီပို့၊ Electronic စက်ရုံများ၊ မြောက်ပိုင်းအိမ်ရာ၊ ၂၁ မိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဗဝတ၊ ပြင်စာကျေးရွာ၊ သုံးတောင်၊ ဆက်သွယ်ရေးTower၊ Teleport တောင်ပိုင်းအိမ်ရာ၊ Cyber Hall၊ ရဲသိပ္ပံသင်တန်းကျောင်း၊ ရတနာပုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းအိမ်ရာများ(၂၀၀)ဧက။
(၅) ၁၃၂ ကေဗွီ ရေပေါင်းဆုံပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ (၂၁)ရက်
၁၃၂/၃၃/၁၁ကေဗွီ၆၀ အမ်ဗွီအေ (Baoging Tianwei,China)
စုစုပေါင်း ၆၀ အမ်ဗွီအေ
(၁) ကလော(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ကလော(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) သာစည်(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) သာစည်(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) ယင်းမာပင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) ထူးဘိလပ်မြေစက်ရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ရွှေတောင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) YCDC ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) ပြည်ညောင်ကျေးရွာ ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) ယင်းမာပင်ကျေးရွာ ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) ၁၃၂ ကေဗွီ လက်ပန်လှ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၅)ရက်
၁၃၂/၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၂၀ အမ်ဗွီအေ (Imefy, Spain)
၁၃၂/၆၆/၁၁ ကေဗွီ ၆၀ အမ်ဗွီအေ(Xina XD, China)
စုစုပေါင်း ၈၀ အမ်ဗွီအေ
(၂) ငှက်ပျောဒိုင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) မိုးကုတ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) စဉ့်ကူး ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ကျောက်ကြီး ဓာတ်အားလိုင်း
မိုးကုတ်၊ သပိတ်ကျင်း၊ စဉ့်ကူး၊ ကျောက်မြောင်း၊ အမှတ်(၁) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတပ်(ကျောက်ကြီး)။
(၇) ၁၃၂ ကေဗွီ အင်းကုန်း ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
ကျောက်ဆည်မြို့၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၇)ရက်
၁၃၂/၃၃/၁၁ ကေဗွီ၆၀ အမ်ဗွီအေ (Daihen, Japan)
(၁) ကင်းတား ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) တောင်တော်ကွင်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) စက်မှုဆေးဝါးစက်ရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ဝါနှင့် ပိုးချည်စက်ရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) တောင်တော်အဆင့်မြင့် ဆက်သွယ်ရေးတပ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) စက်မှု(၁) စက်ရုံကြီးများ ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) စက်မှုလယ်ယာ ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) မိုင်းမောတပ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၈) ဖျောက်ဆိပ်ပင်တပ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၉) မှန်စက်ရုံ ဓာတ်အားလိုင်း
(၁၀) မြစ်သား + ကူမဲ ဓာတ်အားလိုင်း
ကျောက်ဆည်မြို့တောင်ဘက်ခြမ်း၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ ကူမဲမြို့နှင့်ဝမ်းတွင်းမြို့ မြောက်ဘက်ခြမ်း၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ၊ ဝါနှင့်ပိုးချည်၊ စက်မှု(၁)စက်ရုံကြီးများ၊ ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံ၊ စက်မှုလယ်ယာ၊ မှန်စက်ရုံ၊ တောင်တော်တပ်နယ်၊ ဖျောက်ဆိပ်ပင်တပ်နယ်နှင့်မိုင်းမောတပ်နယ်။
(၈) ၁၃၂ ကေဗွီ အနီးစခန်း ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၃၂/၃၃/၁၁ကေဗွီ ၆၀ အမ်ဗွီအေ (Areva, Indonesia)
(၁) ရွှေစာရံ-ရတနာပုံ-အနီးစခန်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) အမှတ်(၁)သံနှင့်သံမဏိစက်ရုံ(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ပြင်ဦးလွင် ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) တပ်နယ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) တ.သ.န ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) ဆေးဝါး ဓာတ်အားလိုင်း
(၇) သ.ပ.န ဓာတ်အားလိုင်း
(၈) အသံလွှင့် ဓာတ်အားလိုင်း
(ဂ) ၁၁ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ
(၁) စည်သာ(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) စည်သာ(၂) ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) ကန်တော်ကြီးအိမ်ရာ+ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဓာတ်အားလိုင်း
(၉) ၁၃၂ ကေဗွီ အောင်ပင်လယ် ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက်
၁၃၂/၃၃/၁ ကေဗွီ ၃၀ အမ်ဗွီအေ(NANTONG, CHINA)
၁၃၂/၁၁ ကေဗွီ ၃၁.၅ အမ်ဗွီအေ(Changzhou, China)
စုစုပေါင်း ၆၁.၅ အမ်ဗွီအေ
အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်။
(၁၀) ၁၃၂ ကေဗွီ တောင်တော်ကွင်း ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက်
၁၃၂/၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၅၀ အမ်ဗွီအေ (Siemens, China)
စုစုပေါင်း ၁၅၀ အမ်ဗွီအေ
(၁) အင်းကုန်း ဓာတ်အားလိုင်း
(၁) AAA(ဘိလပ်မြေ) ဓာတ်အားလိုင်း
(၂) ကျားခေါင်း(ဘိလပ်မြေ) ဓာတ်အားလိုင်း
(၃) မြန်မာဆင်(ဘိလပ်မြေ) ဓာတ်အားလိုင်း
(၄) သံတော်မြတ် ဓာတ်အားလိုင်း
(၅) မြို့ကြီး(၁) ဓာတ်အားလိုင်း
(၆) မြို့ကြီး(၂) ဓာတ်အားလိုင်း